🥇 ▷ Ololaha Gears 5 waxaa dhiirrigeliya ciyaaraha adduunka ee furan ✅
Ololaha Gears 5 waxaa dhiirrigeliya ciyaaraha adduunka ee furan
Dhiirrigelinta ay Microsoft sameysay ee cusub Gears 5 Way ka yara duwan tahay waxa lagu qabtay cinwaanada magacyada kale ee magacyada la magac baxyada. In kasta oo macluumaad ku filan lagu sii daayay noocyo badan, sida khariidadaha ciyaaruhu furitaanka yeelan doonaan ama ciyaarta ciyaarta ee yaxaas Waxa uu la socdaa Terminator sagaalka, xaqiiqdu waxay tahay in aan kali ku hayn macluumaad kusaabsan qaabka ololaha, wax uun maalmo yar ka hor bilaabista ayaa ah wax soo jiidanaya indhaha.
Faahfaahinta yar ee aan hayno ayaa ah in Gears 5-kaas loogu talagalay inuu noqdo cinwaanka ereyga ugu furfuran iyo, tan, sida laga soo xigtay Rod Fergusson ee Isbahaysiga, cunsurro badan oo ka mid ah cayaaraha adduunka ugu wanaagsan ee qaybta ayaa la qaatay.
Gears 5: socodsi xornimo badan
Dhawaan, wareysi ay siisay GameSpot, Fergusson ayaa sheegtey taas Gears 5 looma tixgelin karo inuu yahay ciyaar adduunka u furan sidaas oo kale, laakiin waxay ka kooban tahay xubno laga soo qaatay wareegyo aad u wanaagsan oo qaabkan ah.
Waxay ahayd inaan waxyaabo badan dhex galno si aan u helno. Nasiib wanaagse waxaan helnay dad ka socda Assassin’s Creed iyo Far Cry, oo ah dad horey uga shaqeyn jiray cayaaraha noocan ah. Waxaanna ogaannay inaannan isku deyin inaan noqono mid kale oo ah ‘Red Dead’ ama ‘Far qaylo’ ama ‘Recon Ghost’. Waxaan dhahnay: Sideen u qaadan karnaa Gears oo aan ka yeelnaa inuu dareemo furfurnaan iyo ballaarin isagoo aan isku dayin inaan wajiga Ubisoft wajaho? Sababta oo ah runtii maahan waxa ciyaartani tahay. Waxaan kaliya dooneynay inaan ku dhiirigelino hiddaha aan jecel nahay inaan siino xorriyad yar iyo fikirka ah doorashada ciyaaryahanka.
Gears 5 wuxuu imaan doonaa bisha Sebtember 6 dhamaan adeegsadayaasha ‘Xbox Game Pass Ultimate’ ama milkiileyaasha daabacaadan Ultimate Ultimate. Dadka kale, cinwaanka ayaa ku soo bixi doona Sebtember, 10aad, sidaa darteed waxaa jira maalmo aad u yar oo u haray si loo hubiyo dhammaan wararkaas oo ballanqaadaya inuu keenayo qaabka ololaha la filayo.